नाट्यसम्राट स्मरणीय बालकष्ण समको सम्झना | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ माघ २३ गते ०४:३०
‘यो बास कुनै हो मेरो नीत्य जीवन मार्गको,
म कतैतिर हिड्ने छु स्वप्न पुरा भएपछि ।’
आजभन्दा ५२ बर्ष अगाडि माघ महिनामा मैले नाट्यसम्राट बालकृष्ण समर्ला भेट्न भनेर ज्ञानेश्वर पुगें । समजीको प्रवेशद्वारको ढोकामा फलामका अक्षरले लेखिएको उनको मन परेको रचना मध्येको एक हो यो । पहिलो पटक समजीलाई भेट्न जादा मैले उक्त कविता डायरीमा लेखेर भित्र पसें । स्वयम्भूको स्वरुपको आँखा भएको निवासको ढोका ढक–ढक गरें । लामो कोट लगाएका खाइलाग्दा उज्यालो महापुरुषले ढोका खोलेर सोध्नु भयो– कताबाट ? मैले भनें हजूरको दर्शनको लागि आएको आठराईबाट । मैले आठराईबाट ल्याएको एउटा राम्रो खुकुरी समजीलाई उपहार दिन बोकेको थियो । मलाई भित्र लिएर जानुभयो । बसाउनु भयो । मैले उपहार स्वरुप ल्याएको खुकुरी समजीको हातमा दिदैं– मेरो उपहार भने । उहाँले आठराईको खुकुरी अत्यन्त खुसी भएर लिनु भयो । समले भन्नु भयो मलाई आठराई साह्रै मन छ तर अहिलेसम्म जान पाएको छुइन । २०२४ साल माघ २४ गते दश–एघार बजेतिर मेरो पहिलो भेट थियो ती महान साहित्यकारसँग । मलाई थाहा थिएन, तर त्यो दिन समजीको जन्म दिन रहेछ । त्योदिन पनि समजीले भन्नु भएन, पछि आफै थाहा पाउँ । नेपलाको एउटा मुर्धन्य व्यक्तित्वसँगको पहिलो भेट उहाँके जनम दिन परेकोमा मैले पछि मेरो अहोभाग्य ठाँनें । त्योदिन भित्र हाम्रो कुरा शुरु भयो । समजीका नाटकका धेरैजसो कविता मलाई कण्ठ आउथे । मैले मुटुको व्यथाका केही हरफ भनेपछि समजीले पनि बडो नाटकीय पाराले कवितात्मकरुपमा सुनाउन थाल्नु भयो ।
‘स्वर्गबाट यहाँ ओर्ले भने अमर मर्दछन्, चिन्ताको रापले सुक्दै किता पथ्थर बन्दछन् । समजीको ‘मुटुको व्यथा’ नाटकमा व्यक्त यो कविताको ब्याख्या गरेर मैले सुनाएँ । निचोडमा ‘बुद्धले पनि पाप गरे भने नरक पुग्छन्’ भन्ने अर्थ थियो । समजी मसँग असाध्यै प्रभावित हुनभयो । मैले समलाई भेट्न पाउछु कि पाउँदिन भन्ने चिन्तामुक्त भएको सुनाए । डेड घण्टाको भेटपछि समजीबाट मलाई एक पुस्तक ‘नियमित आकस्मितता’ हस्ताक्षर गरेर उपहार दिनु भयो । मैले नियमित आकस्मितता पढेपछि समजीबाट गरिएका संसारिक चित्रण र मानवीयताका सम्वेदनशील कुरा अध्ययन गर्दा त्यो गहिराईमा छटपट्टिएर मँ यति मोहीत भएकि बालकृष्ण सम नेपालको साहित्यको भण्डार र देशको ठूलो सम्पत्तिको रुपमा मैले सम्मान गरे । त्यसपछि म हरेक शनिवार भेट्ने समय दिएपछि बडो गौरवकासाथ मैले त्यो दिन बिताएँ । महान व्यक्तित्वहरुलाई भेट्नु भनेको ठूलो उपलब्धि हात लाग्नु हो । एकदिन ढिला भएछ । ती महान व्यक्तिले म नआउने बुझेर लेख्न थाल्नु भएछ । ढोका खोल्दै तपाई नआउने होला भन्ने ठानेर लैख्न थालेको थिएँ भन्दै लेखेका केही अंश समजीले मलाई सुनाउनु पनि भयो । अर्को दिन व्यस्थताले गर्दा समजीलाई भेट्न जान ढिला भयो । म क्षेत्रपाटी सातचोक दरबारको माथिल्लो कोठामा बस्छु भनेर समजीलाई मैले पहिला भनेको थियो । त्योदिन अपरान्ह म ज्ञानेश्वरतर्फ लाग्दा उहाँ रिक्सामा चढेर क्षेत्रपाटी आउँदै हुनुहुदोरहेछ । म छक्क परें र समजीलाई भेटेर नमस्ते गर्दै त्योदिनको कारण बताएँ । समजीले भन्नु भयो–‘तपाईंलाई के प¥यो भनेर खोज्दै आएको ।’
समजी अभिनय गर्नमा पनि त्यत्तिकै ओस्ताद हुनुहुन्थ्यो । वहुमुखी प्रतिभाका धनी बालकृष्ण सम नेपालमा अविस्मरणीय महान स्रस्टा हुन् । समजीका नाटकका धेरैजसो कविता मलाई कण्ठ आउथे । मैले मुटुको व्यथाका केही हरफ भनेपछि समजीले पनि बडो नाटकीय पाराले कवितात्मकरुपमा सुनाउन थाल्नु हुन्थ्यो । साहित्य र संगीत राष्ट्रको सम्पत्ति हो । संगीत विश्वको भाषा हो भने साहित्य सिर्जना हो । यी दुई वर्तमान र भविष्यका ऐना हुन् । साहित्य र संगीतले युगको प्रतिनिधत्व गर्ने गर्छ । साहित्य बारेमा कालीदासले भनेका छन्–“कवि करोेती काब्यानि, रस जानन्ति पंडिता” कविले काव्यको रचना गर्दछन्, त्यसको रस विद्धानहरुले लिन्छन् । यो सत्य हो कि साहित्य भनेको मानवलाई असली पे्रममय रसस्वादन गराउने शास्त्रीय बाटो हो । बालकृष्ण समले आफ्ना अनेकौं नाटकहरु र काव्यहरुबाट नेपाललाई धनी बनाए । समको एउटा महाकाव्य–‘चिसो चुल्हो’मा सन्ते दमाईले माथिल्लो जातकी गौरीसँगको प्रेमको उजगार गरेर नेपाली समाजलाई बन्धनबाट मुक्त गराउने सन्देश दिन सके । समले विभिन्न विधाका कैयौं पुस्तक लेखेर नेपाली साहित्यलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सके । त्यो महान व्यक्तित्व हाम्रो सामू नभए पनि समजी अमर हुनुहुन्छ । ‘उनी बोल्नेसाथ साहित्यका फोहरा फुट्थे । ‘ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोही विज्ञान मर्दछ ।’ कति गहिराई छ समजीका कवितामा ।
बालकृष्ण सम, नाटककार, चित्रकार, निवन्धकारको रुपमा नेपाली समाजमा प्रतिविम्वित छन् । समजीबाट तयार गरिएका चित्रहरु प्रसन्सनीय छन् । गेहेन्द्रमान अमात्यले लेखेका छन्– नेपाली सेनाका कर्नेल थिए सम, कर्नेल पदबाट राजीनामा गरेर नेपाली साहित्यको सेवामा अर्पित भए र राणाशाहीको बिरोधमा स्वतन्त्रताको पक्ष लेख्न थाले । नेपाली साहित्यका अग्रनी मध्येका आपदकवि भानुभक्त, लेखनाथ पौडयाल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, ह्रदयचन्द्र सिंह प्रधान, भवानी भिक्षु, भीमनीधि तिवारी, धरणीधर कोइराला, महानन्द साप्कोटा, सिद्धीचरण श्रेष्ठहरु नेपालको राष्ट्रिय एकताका द्योतक हुन्, यथार्थ । देशको स्वाभिमानप्रति आवद्ध भएरैं उनीहरु विश्व साहित्यसंग दाँजिन पुगे । ‘क्यै हारे झैं, क्यै बिर्से झै, को त्यो पथमा आइरहेको ? सत्य नचिन्ने, झूट अँगाल्ने, गिर्र्दै तल तल म उठें भन्ने, मान्छे हो तर आत्माहीन, को त्यो पथमा आइरहेको ?’ युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको उक्त कविता पछि नाट्य सम्राट बालकष्ण समले त्यसको जवाफमा ‘केही जिते झैं, केही संझै झैं को त्यो पथमा गाइरहेको ? मानिस जस्तै शुरशुरु हिंडदै को त्यो पथमा गाइरहेको’ भन्ने सिद्धिचरणको ‘मेरो प्रतिविम्ब’ र समजीको ‘प्रतिविम्बप्रति’ को कवितात्मक वादविवादले नेपालका नवोदित साहित्यकारहरुलाई सिर्जनात्मक बाटोमा प्रेरित गरेको थियो । साहित्य एउटा सिर्जना हो । मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै गहिरो छाप नपरी असल साहित्यको सिर्जना हुन सक्तैन ।
‘क्यै हारे झैं, क्यै बिर्से झै, को त्यो पथमा आइरहेको ? सत्य नचिन्ने, झूट अँगाल्ने, गिर्र्दै तल तल म उठें भन्ने, मान्छे हो तर आत्माहीन, को त्यो पथमा आइरहेको ?’ युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको उक्त कविता पछि नाट्य सम्राट बालकष्ण समले त्यसको जवाफमा ‘केही जिते झैं, केही संझै झैं को त्यो पथमा गाइरहेको ? मानिस जस्तै शुरशुरु हिंडदै को त्यो पथमा गाइरहेको’ भन्ने सिद्धिचरणको ‘मेरो प्रतिविम्ब’ र समजीको ‘प्रतिविम्बप्रति’ को कवितात्मक वादविवादले नेपालका नवोदित साहित्यकारहरुलाई सिर्जनात्मक बाटोमा प्रेरित गरेको थियो । साहित्य एउटा सिर्जना हो । मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै गहिरो छाप नपरी असल साहित्यको सिर्जना हुन सक्तैन । समलाई सेक्सिपिएरसँग दाज्नेहरु पनि धेरै छन् । समजी अत्यन्त देशभक्त थिए । ‘देशभक्त त मर्दैन, चुथ्थै देश भएपनि’ सन्देश मुकुन्द इन्दिरा नाटक मार्फत दिएका छन् । त्यो महान व्यक्तित्वले सँधै स्वदेशी पहिरनलाई ग्रहण गर्नेगर्थे । उनले देशभक्ति जगाउन अनेकौं प्रयन्त गरे । नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि उनी गोरखापत्रका प्रमुख सम्पादक पनि बने । नेपाल राजकीय प्रज्ञाप्रतिष्ठानको उपकुलपति हँदै राजसभा स्थायी समितिको सदस्यको रुपमा रहेको अवस्थामा पनि अनेको पुस्तकहरु नेपाली समाजलाई दिलाए । राष्ट्रिय विभूतिको पुस्तक २०२४ सालमा समजीबाटै लेखिएको हो ।
बाल्मिकि ऋषिले गण्डकी किनारमा बसेर रामायण लेखेपछि हिमवतखण्डको यो क्षेत्र कवितामय हुन गयो । वाल्मिकि संस्कृतका आदि कवि हुन् । त्यही बेलादेखि यसक्षेत्रमा अनेकौं कवि कलाकारहरु देखा पर्न गएका हुन् । त्यही वाल्मिकि रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर भानुभक्तले नेपालभरी रसस्वदन गराउने काम गरे । भानुभक्तलाई पनि कविता र महाकाव्य लेख्ने पे्ररणा घाँस बेचेर कुवा खनाउन लागेको एउटा सानो धाँसीबाट पाए । ‘घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, मो भानुभक्त घनि भैकन आज यस्तो ।’ यसरी नेपालका सिर्जनात्कम प्रतिभाका स्रष्टाहरुलाई बिर्सन सकिदैन । लिओ टोल्स्टाय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, म्याक्सिम गोर्कीहरु आदि यस्ता स्रष्टाहरु छन् जस्लाई समयले जन्मायो ।
त्यस्ता साहित्यिक स्रस्टाहरुको परिकल्पनाले युगको प्रतिनिधत्व गर्ने गर्छ । भानुभक्त नेपाली साहित्यका चरित्रका पुञ्ज हुन् । नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली साहित्यलाई दिगो र अमर बनाउन नेपालका कविवर स्रष्टाहरुबाट जुन योगदान गरे त्यसलाई नेपालीहरुले बिर्सन सक्तैनन् । भानुभक्त आचार्यले बाल्मिकि रामायणलाई नेपाली भाषामा छन्दमय पद्यमा अनुवाद गरेर नेपाली जनमानसलाई श्लोकमय बनाएका थिए । भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि हुन् भने बाल्मिकि संस्कृत भाषाका आदिकवि हुन् । नेपालको चितौन, नारायणी नदीको पश्चिम किनारमा आफ्नो कर्मस्थल–आश्रम बनाई बाल्मिकिले बाल्मिकिले रामायण लेखे । रामले सीतालाई त्यागेपछि त्यही ठाउँमा सीताले आश्रय लिएकी थिइन् । त्ही लव, कुशको जन्म भएको थियो । ‘मानिसाद प्रतिष्ठात्मय शास्वस्ती समाः, यादक्रौंच मिथुनादेकः ममधि काम मोहितम् ।’ यो संस्कृत साहित्यको पहिलो कविता हो । त्यही रामायणलाई अनुवाद गरेर भानुभक्त नेपाली भाषाका आदिकवि बन्न पुगे । बाल्मिकि र भानुभक्त यी दुबै नेपालका विभूति हुन् ।
समजी त्यस्तै प्राकृतिक भावनाबाट अभिपे्ररित एक महान साहित्यका स्रोत हुन् । समजीका कतिपय मार्मिक कविताहरु उहाँलाई कण्ठ सुनाउथेँ पनि । भावुक बनेर कविता सुनाउँदा उहाँ बढो प्रभावित हुनुहुन्थ्यो । एकदिन समजीले मलाई सुनाउनु भयो । ‘चोभारको पहाड फोरेर मञ्जुश्रीले पानी निकाएको नहुनसक्छ, त्यसठाउँमा चटयाँङ्ग परेर उपत्यको पानी चोभारबाट निकाश दिएको कुरा धेरै वैज्ञानिक हुनसक्छ ।’ सोच्तै नसोचेको कुरा यसरी समजीबाट थाहा पाए पछि मैले त्यसलाई नैं सत्य ठानेको छु । बालकृष्ण समले आफ्ना अनेकौं नाटकहरु र काव्यहरुबाट नेपाललाई धनी बनाए । समको एउटा महाकाव्य–‘चिसो चुल्हो’मा सन्ते दमाईले माथिल्लो जातकी गौरीसँगको प्रेमको उजगार गरेर नेपाली समाजलाई बन्धनबाट मुक्त गराउने सन्देश दिन सके । नेपालमा राजनीति नेताहरुले राष्ट्रलाई निर्धारित बाटो दिन नसकेता पनि नेपालका स्वाभिमानी कायम राख्न नेपालमा हिजोका साहित्यकारहरुको सिर्जनात्मक जागरणले अहिलेसम्म हामीले खुट्टा टेक्न पाएका छौं ।
बालकृष्ण समजीको सबैभन्दा मलाई मन परेको कविता हो यो–
‘यो नेपाल स्वतन्त्र भई फूलिरहोस्, राजा प्रजामा सँधै, झाँर्गी फैलिरहोस् बढेर लहरा यै शान्ति ऐश्वर्यको,
यो सन्देश म ब्रह्मनाल तकिा पारी पठाउँ वहाँ, साक्षी शंकर छन् स्मसानपछिका आशा रहेका जहाँ ।’
इच्छा यो छ महेश, अन्तिम जसै यो मृत्यूसैयामा जली, मेरो रक्त सुकाउला म गरुँला अन्योल भै छट्पटी,
त्योबेला मुखमा बुटीहरु परुन् नेपालकै केवल, जे–जेमा हिमशैलीको छ मधुरो मीठो चीसो चुम्बन ।
बज्ला मन्दिरमा ‘तथास्तु’ जब यो घण्टा दिदै उत्तर, हातै शान्त भई उही समयमा नेपाल हेरी मरुँ,
मेरो लाश पवित्र चन्दन घसोस्, कात्रो मलाई कनोस्, नेपाली सुकुमार हातहरुले खस्रा बुनेका लुगा ।
नेपाली बनका कपुर तुलसी श्रीखण्डका साथमा, प्यारो सुन्दर आर्यघाट तटको साजा चितामा जलू,
पाउँ बस्न मरेर आखिर गई स्वर्गीय त्यही ठाउँमा, नेपालीहर छन् मरिकन सबै जन्मिरहेका जहाँ ।’
यस्ता ह्रदयस्पर्सी देशभक्त भावनाबाट अभिप्रेरित ती बालकृष्ण समजी कति महान देशभक्त थिए । त्यस्ता मेरो आत्मिय महान साहित्यकारको स्वगोरोहण भएको दिन मलाई जानकारी हुन सकेन र मैले ती स्मरणीय समजीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्न नपाउँदा मलाई अत्यन्त विस्मत छ । नेपालको साहित्तिक जगतका अग्रज व्यक्तित्व वालकृष्ण समजीको शालीक उहाँको सम्मान स्वरुप नेपाल साहित्य परिषदको सक्रियतामा कमलपोखरीमा स्थापित छ । माघ २४ गते बालकृष्ण समजीको जन्म जयन्तीको उपलक्षमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जिलि अर्पण गरौं । समजी अहिले हामीबीच नरहेता पनि बालकृष्ण सम हामी सबैको नजरमा अमर छन् ।
-दीर्घराज प्रसाई -Email: dirgharajprasai@gmail.com